Author Topic: Khusbu Oli accuses Arpan Koirala on the death of Chari, who is Arpan? (Read 3198 times)
« on: August 08, 2014, 04:45:11 AM »
UPDATE: Messages from Arpan Koirala to Khusbu: According to Miss Teen 2006 Khusbu Oli, Arpan Koirala has been following her foralong time. In an earlier interview, Khusbu has claimed that she had helped Arpan out of drugs addiction. It seems, they hadarelationship before it broke. It sounds like Dinesh Adhikri ‘Chari’ <a href='http://xnepali.net/fashion/khusbu-oli-accuses-arpan-koirala-on-the-death-of-chari-who-is-arpan/' class='excerpt-more'>[...]</a>
Source: Khusbu Oli accuses Arpan Koirala on the death of Chari, who is Arpan?
« Reply #1 on: August 12, 2014, 10:47:23 AM »
अर्पणको सम्पत्ती लुटेपछि सेफ हुन चरीसँग लागेकी थिईन् खुश्बु ओली
२० हजार पाउण्ड ठगेको रहस्य
बिश्वकै महंगो बिश्वबिद्यालयमा पढेर आफू सम्पन्न परिवारको छोरी दाबी गर्ने खुश्बु ओली अहिले चर्चाको शिखरमा छिन् । गुण्डाका नाईके दिनेश अधिकारी ‘चरी’ को प्रहरी मुठभेडमा मृत्यु भएपछि खुश्बु भने प्रहरीका ईन्सपेक्टर कुमोद ढुंगेल र भुपू पे्रमि अर्पण कोईरालालाई दोष लगाउदै चर्चा बटुल्न थालेकी छिन् । नेपालमा प्लस वन फेल भएपछि खुश्बुलाई अर्पणले पुतलीसडकस्थित एसि कन्सल्टेसीको सहयोगमा बेलायतको भिसा लगाएका थिए । त्यतिबेला अर्पण ब्यापारको सिलसिलामा बेलायत जाने र आउने गर्दथे ।
अर्पणको फ्ल्याटमा बसेर उच्च सिक्षा हासिल गर्न सफल भएकी खुश्बु अहिले अर्पणलाई आफूले सुधारेको दाबी गर्न थालकी छिन् । दुई बर्षसम्म अपर्णस“गै खुश्बु बेलायतमा ‘लिभिङ टुगेदर’ रहेकी थिईन् । अर्पणकै सम्पत्तीमा मोजमस्ति गर्ने खुश्बुले हरेक बर्ष बर्थडेमा लाखौ रुपैंया खर्च गर्दै आएकी थिईन् तर यसपाली पैसाको अभाबले घर मै मनाएकी थिईन् । गत साल खुश्बुको बर्थडे पार्टी दरबारमार्गको प्लाटुनम डिस्कोमा भएको थियो । जसको सम्पूर्ण खर्च अपर्णले ब्यहोरेका थिए । अर्पण मार्फत चिनजान भएका बेलायती नागरिक रोबट डंकनले खुश्बुलाई अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा स्कलरसिप मिलाईदिएका थिए ।
तर खुश्बु अहिले मिडीयालाई अन्तबार्ता दिदै बाबुको सम्पत्तीले पढेको दाबी गर्दै आफू सम्पन्न परिवारको छोरी भएको भ्रम छर्न थालेकी छिन् । बिभिन्न ब्यक्तिहरुस“ग पैसा सापट लिने अनि अपर्णलाई तिर्न बाध्य बनाउने खुश्बु अर्पण टाट पल्टिएपछि चरीस“ग लागेको उनी निकट स्रोत बताउंछ । खुश्बुका कारण अर्पणले आफ्नो बिजुली बजारको पुरखौली घरसम्मपनि बा“कि राखेनन् । अर्पणको घरमासमेत खुश्बुलाई बुहारीको नामले सम्बोधन गर्थे र खुश्बुले अर्पणको बुबा आमाललाई सासु ससुरा भनेर सम्बोधन गर्थिन । अर्पणले खुश्बुका आमा बुबालाईसमेत बेलायत घुम्न लगेका थिए । अपर्ण टाट पल्टीएपछि भग्सवागेनको महंगो जिपमा सवार हुने र अर्पणलाई दाईको नामले सम्बोधन गर्ने युवासंग खुश्बुको मायापिरती गांसिन पुग्यो ।
उनै युवा थिए ‘डन चरी’ । चरीलाई पछिल्लो समय खुश्वुले ठगी धन्दामा प्रयोग गर्ने थालेकी थिईन् । जसका कारण चरीको बजारमा तिन करोड भन्दा बढी पैसा उनले तिर्न बांकि छ । असिमीत इच्छा पूर्ति गर्न खुश्बुले बिभिन्न व्यक्तिहरुलाई सरसापटको नाममा पैसा लिएर ठगी गर्ने र सो रकम तिर्न अर्पणलाई झै चरीलाई बाध्य बनाउन थालेपछि चरी बिस्तारै उनिस“ग टाढिन थालेको चरी निकट स्रोत बताउंछ । चरीलाई धार बनाएर खुश्बुले आफ्नो ‘स्ट्यान्डर मेन्टेन’ गर्दै आएकी थिइन ।
मायाँको जालो बुनेर अर्पणको सम्पत्ति उडाएपछि डन चरीसँग नजिकिन पुगेकी खुश्बुको महत्वकांक्षामा चरीको असुली धन्दाबाट थुपारेको कालो धनले नभ्याएपछि चरी गोठाटार तिर बस्ने एमबिबिएस पढ्दै गरेकी एक युबतीसंग अफेयर चलाउन थालेका थिए । दुई साता देखि गोदावरी बस्दै आएका चरी त्यहां पनि उक्त युबतीसंगै थिए । चरीको अन्तिम रात तिनै युबतीस“ग गोदावरीको एक रिसोर्टमा बितेको थियो । मिठो स्वरकी धनीका साथै रुपकी रानी भनेर चिनिने खुश्बुले चिनजानेका ब्यापारी तथा मिटर ब्याजमा पैसा लगानी गर्नेसँग सरसापटको नाममा पैसा लिने र फिर्ता नगर्ने गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
डिएसपी केसी र ईन्सपेक्टर ढुंगेललाई किन पोलिन खुश्बुले
समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेपालि नायिकाको नाममा फेक एकाउण्ट खोल्दा खुश्बु दुई बर्ष अघि डिएसपी प्रजित केसीको फन्दामा परेकी थिईन् । नायिका माल्लिका सुब्बा र मोडल स्मृति ब्रजाचार्यको नाममा खुश्बुले फेक एकाउण्ट खोलेर दुरुपयोग गरेको उजुरीको आधारमा खुश्बुलाई डीएसपी केसीले पक्राउ गरेका थिए । नायिका सुब्बा र ब्रजाचार्यस“ग माफि मगाएर खुश्बु हिरासत मुक्त भइकी थिईन् ।
खुश्बुको संगतले प्रहरीका एसएसपी भोगबहादुर थापाकी छोरी रक्षा थापासमेत फसेकी थिईन् । खुश्बुलाई पक्राउ गरेको रिस अहिले उनले डिएसपी केसीलाई फेरेकी हुन । त्यस्तै उनले चरी हत्यामा ईन्सपेक्टर कुमोद ढुंगेललाई मुछ्नुको कारण पनि उस्तै छ । चरीले चढमेको गाडिको पैसा नतिरेपछि ललितपूरका ब्यापारी राजन श्रेष्ठले प्रहरीमा गाडी तानिदिन निबेदन दिएका थिए ।
सो गाडी ढुंगेलले पक्राउ गरी ब्यापारीलाई फिर्ता गरेको कारण एक हो भने अर्को चंडोलस्थित खुश्वुको घरबाट अर्पणको गाडी जफत गर्नु हो । प्रहरीले गाडि बरामद गरेरे हनुमानढोका ल्याएको पनि थियो । तर खुश्वुले उक्त गाडि कोइरालाको नभई आफूले बैंकबाट लिलाम सकारेको दाबी गर्दै बागमति अञ्चल यातायात कार्यलयबाट जारी बिलबुक एसएसपी रमेश खरेलको अगाडी पेश गरेपछि खरेलले गाडी फिर्ता गराएका थिए । गाडि तानेपछि ढुंगेलसँग रुष्ट बनेकी खुश्बुले चरी काण्डमा रिस फेरेको प्रहरीमा चर्चा छ ।
« Reply #2 on: August 12, 2014, 10:47:51 AM »
« Reply #3 on: August 12, 2014, 06:38:51 PM »
खुश्वुले आरोप लगाएकी अर्पण उनकै अगाँलोमा!
प्रहरी मुठभेडमा मारिएका भनिएका गुण्डा नाइके दिनेश अधिकारी चरीको प्रेमिका मोडल खुश्बु ओलीले हत्या प्रकरणमा आरोप लगाएकी अर्पण कोइरालासँगको सम्वन्ध यतिखेर चर्चामा छ। चरिको हत्यामा अर्पणको नाम जोडेकी खुश्वु र अर्पणबीच कुनै समय एकदमै रा्मरो सम्वन्ध रहेको पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको एक तस्विरले गरेको छ। स्पटलाइटको लोगो रहेको सो तस्विरमा अर्पण र खुश्वु रमाइलो मुद्रामा तस्विर खिचाइरहेको देखिन्छ।
ओलीले आफ्नो प्रेमीको हत्याको सूत्रधार आफू नभएर अर्पण कोइराला र प्रहरी निरिक्षक कुमुद ढुँगेल भएको आरोप सोमबार मात्र पनि एक कार्यक्रममा लगाएकी थिइन्। तर तिनै अर्पण चरीसँग भेट्नुअघी कस्ता साथी थिए भन्ने सो तस्विरले देखाएको छ। खुश्वुको चरीसँग भेट हुने सुत्रधार पूर्व प्रेमी अर्पण नै थिए भन्ने कुरालाई पुष्टी गर्न सो तस्विर काफी रहेको खुश्वु र अर्पणलाई चिन्नेहरु बताउँछन।
खुश्वु बेलायतमा अध्ययन गर्न जान अपर्ण पनि सँगै गएका थिए। उनीहरु बेलायतमा रहँदा लिभिङ रिलेसनमा थिए त्यो सम्वन्धलाई चिनेकाहरु बताउँछन्। चरी र खुश्बुबीच भेट हुनु पहिले खुश्बुले बेलायतको बसाइकै बेलादेखि अर्पणबाट मोटो रकम कुम्ल्याइसकेकी थिइन्। अर्पणले खुश्बुका लागि गाडी र घरसमेत किनिदिएका थिए । तर, जब खुश्बु र चरीबीच सम्बन्ध झांगियो उनले अर्पणलाई इन्कार गर्दै गइन् र सम्पत्ती पनि सबै लिइन् ।
स्रोतका अनुसार अर्पण आफ्ना आमा बुबाको उपचारका लागि भारतमा रहेका छन। खुश्वुले धोका दिएर नेपालमा विजोग भएपछि भारतमा सानोतिनो व्यवसाय गर्दै आएका अर्पण खुश्बु आमाबुबाको उपचारमा व्यस्त छन। चर्चित साहित्यकार धरधीधर कोइरालाको नाती अर्पण आमाबाको असल छोरा बन्ने अभियानमा लागिरहेको बेला खुश्बुको तर्फबाट लागेको आरोपबाट भने दिक्क रहेको उनका आफन्तहरु बताउँछन।
« Reply #4 on: August 13, 2014, 12:37:18 PM »
चरी मारिँदा खुश्बुको मुहारमा मुस्कान!
डेढ वर्ष अगाडि दिनेश अधिकारी ‘चरी’ खुश्वु ओलीलाई भाउजु भन्थे। किनकी चरीका साथी अर्पण कोइरालाले खुश्वु ओलीलाई आफ्नी श्रीमतीका रुपमा चिनाएका थिए। अर्पण खुश्वुकै घरमा घरज्वाईजस्तै गरी विगत ५ वर्षदेखि लिभिङ टुगेदरका रुपमा बस्दै आएका थिए। गाँजा खाने, क्यासिनो जाने र मोजमस्तीमा पैसा उडाउने अर्पणले परिवारको सम्पत्ति खुश्वु र मोजमस्तीमा सिध्यासकेका थिए। अर्पणले लण्डन हुँदा नै मासिक १७ सय डलर तिरेर महंगो फ्ल्याटमा खुश्वुलाई राखेका थिए। नेपाल फर्किएपछि पनि त्यही रुपमा खुश्वुका लागि खर्च गर्न थालेपछि उनी बिग्रिदै गएका थिए।
चरीको संगतले अर्पण क्यासिनो पनि जाने गर्दथे। दरबारमार्गको अन्नपूर्ण कफि सप उनको अखडा हुन्थ्यो। नयाँ-नयाँ युवतीलाई लिएर चरी र अर्पण त्यहाँबाट घुम्न निस्कने गर्दथे। खासमा चरीले नै उनका लागि नयाँ–नयाँ युवतीसँग परिचय गरिदिने गर्दथे। अर्पणलाई अर्की युवतीसँग भुल्याएर खुश्वुसँग आफू एक्लै भेट्न उनले त्यो जुक्ति अपनाएका थिए। अर्पण अरु युवतीहरूसँग रमाउदै गर्दा चरी र खुश्वु नजिक हुँदै गए। चरीले खुश्बुलाई आफूतिर आकर्षित गर्न जे भन्यो त्यही किनिदिन थालेपछि खुश्वुले अर्पणसँग झगडा गर्न थालिन्। झगडाको क्रममा उनीहरू छुट्टिए, चरी खुश्वुको प्रिय बने। खुश्वुका लागि किनिदिएको गाडी तथा बिशालनगरमा अनाथालय खोल्नका लागि किनिदिएको जग्गा सबै खुश्वुका नाममा थिए। त्यसपछि अर्पण बिक्षिप्त भए। खुश्वु र मोजमस्तीमा परिवारको सम्पत्ति सबै सिध्याएपछि उनी लागूऔषधको लतमा फसे। अर्पण सकिँदा खुश्वुका दिन सुरु भए। चरी उनको लागि जे गर्न पनि तयार भए। एमालेको राजनीतिमा लागेर सुध्रने प्रयासमा लागेका उनी खुश्वुसँग लागेपछि राजनीतिबाट फेरी अपराधको दुनियाँमा फर्किए। पैसा र खुश्वु, त्यतिमात्र उनको दुनियाँ हुनथाल्यो। निकटस्थका अनुसार खुश्वुुसँग नजिकिएपछि पैसाका लागि उनी जे पनि गर्न थाले।
पछिल्लो सयम ठुला व्यापारीलाई उनले धम्काउन थालेका थिए। जसको उजुरी माथिल्लो तहसम्म पुगिसकेको थियो। आफूलाई सहयोग नगर्ने नेता र प्रहरीलाई समेत धम्काउन थालेपछि उनी प्रहरीको तारो बनेका थिए। जसरी पनि पक्राउ गर्न, भाग्न खोजे इन्काउन्टर गर्न निर्देशन आएपछि झन्डै एक महिना लामो प्रयासपछि गत साउन २१ गते उनको इन्काउन्टर भयो।
यो प्रकरणलाई खुश्वुले आफूसँगको प्रेमको परिणाम भएको बताउने गरेकी छिन्। तर, चरीका सहयोगीहरू खुश्वुले चरीलाई थप अपराधी बनाएको र त्यही कारण उनको इन्कान्टर भएको बताउँछन्। चरी उनको जीवनमा आएसँगै बढेको उनको आर्थिक हैसियतले पनि त्यो कुराको पुष्टि हुन्छ। खुश्वु कुनै काम गर्दिनन्। उनका बुबा श्याम ओली नेपाल प्रहरीका भगौडा असई हुन्। उनले नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणमा पाँचौ तहमा स्थायी हुन नसकेपछि जागिर छाडेका थिए।
३/४ वर्ष अघिसम्म उनीहरूको कीर्तिपुरमा सानो घर थियो। अर्पणसँगै बस्न थालेपछि महाराजगंजको चुनदेवीमा उनीहरूले घर किनेका थिए। अर्पणकै सहयोगमा घर र गाडि किनिएको स्रोत बताउँछ। जब खुश्वुको जीवनमा चरी आए त्यसपछि उनीहरू धापाखेलस्थित डेढ करोड पर्ने सिभिल होममा बस्न थाले। प्रहरीले अस्वभाविक देखिएको स्रोतको छानबिन थालिसकेको छ। वान्टेड भएपनि चरीले मोबाइलमा नेपाली नम्बर प्रयोग गर्न छाडिसकेका थिए। बेलायतको नम्बरबाट भाइबर चलाउने गर्दथे। जसबाट खुश्बु ओली र उनका एकदमै निकट व्यक्तिहरूलाई मात्र उनले सम्पर्क गर्दथे। त्यसकारण प्रहरीलाई छक्याउन उनी सफल भएका थिए।
तर, प्रहरीले चरीको कमजोरी अर्थात् खुश्वुलाई नै अनुसन्धानको आधार बनाएको थियो। खुश्वुका मोबाइल नम्बर तथा उनको घरमा प्रहरीले रेकी थालेको थियो। सोही आधारमा गत बुधबार धादिङ जाने क्रममा चरी मारिएका हुन्। ‘यदी खुश्वुको पछाडी चरी नलागेको भए यो घटना सायद हुदैन थियो,’ चरीका एक साथी भन्छन्,’खुश्वुसँग पागल भएपछि चरी बिग्रिए, असुली धन्दा चर्काएर खुश्वुलाई खुशी बनाउन लाखौँ पोसे, त्यसकै परिणाम उनको इन्काउन्टर भयो।’ स्रोतका अनुसार चरीले खुश्वुलाई ८० हजार रुपैयाँ पर्ने झोला नै गिफ्ट दिएका थिए। चरीसँग नजिकिएपछि उनी म्यूजिक भिडियोहरूमा पनि खेल्न छाडिसकेकी थिइन्, किनकी उनको लागि चरीले जति पनि खर्चको जोहो गरिदिन थालेका थिए।
त्यसो त केही महिनाअघिसम्म चरीलाई आफ्नो ब्याइफ्रेन्ड भन्न समेत खुश्वु रुचाउन्न थिइन्। उनीहरूको सम्बन्ध बारे दृष्टि साप्ताहिकले समाचार लेख्दा उनले दृष्टिविरुद्ध गाली बेइज्जती मुद्दा हालेकी थिइन्। उक्त मुद्दा दृष्टिको पक्षमा गत महिना फैसला भएको थियो। अहिले चरीको मृत्यु भइसकेपछि चर्चा कमाउन र घटनालाई अतिरंजित गर्न मात्र उनले आफ्नो प्रेमका लागि हत्या भएको भन्दै आरोप लगाएको प्रष्ट हुन्छ। चरीका एक साथी भन्छन्,’पैसाकै लागि खुश्वुले चरीसँग प्रेमको नाटक गरेकी थिइन्, साँच्चिकै माया गर्ने मान्छेले आफ्नो ब्यायफ्रेन्ड मारिदा सञ्चार माध्यममा हाँसीहाँसी अर्न्तवार्ता दिन सक्छ?’ यस घटनाले पनि खुश्बुको नियत के थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। (दृष्टि साप्ताहिकबाट)
« Reply #5 on: August 13, 2014, 12:39:06 PM »
खुस्बुले अर्पणलाई एप्पलको म्याकबुकसमेत किनिदिएकी थिइन्
डन नाइके दिनेश अधिकारी चरीको हत्यापछि अर्पण कोइराला र चरीकी प्रेमिका खुस्बु ओलीबारे थप खुलासा भएका छन् । अर्पण र खुस्बु बेलायतमा सँगै बस्दा खुस्बुले अर्पणलाई एप्पलको म्याकबुकसमेत किनिदिएकी थिइन् । अाजाको जनआस्था साप्तहिकमा खबर छ । जबकि पोखराको वसन्त अधिकारीको आइफोन चलाएका अर्पणले अझैसम्म त्यसको पैसा तिरेका छैनन् ।
खुस्बु र अर्पण बेलायतमा डिपेन्डेन्ट भिसामा पढ्न गएका थिए । त्यतिबेला अर्पण मोटो र खुस्बु पाताली थिइन् । त्यसतिबेला रेस्टुरेन्टतिर खाँदा पतिपत्नी भएको परिचय दिन्थे । अहिले उनीहरुको आकार ठिक उल्टो छ । अर्पणका लागि खुस्बुले आफ्नो बुवाको एककरोड जति खर्च गरेकी थिइन् ।
खुश्बुका बुवा ठेक्कापट्टा गर्छन् भने अर्पण सहित्यकार धरणीधर कोइराकालका नाति हुन् । नेपाल आएपछि भने उनीहरुको सम्बन्ध टाढा भयो । चरीसँग खुश्बुको सम्बन्ध गाढा भयो । चरी डल्यो पुलिसको गोलीले, दोष आयो अर्पणको थाप्लोमा ।
« Reply #6 on: August 13, 2014, 01:08:31 PM »
« Reply #7 on: August 13, 2014, 01:11:45 PM »
प्रहरीको ईन्काउण्टरमा मारिएका दिनेश अधिकारी उर्फ ‘चरी’लाई गत बर्ष गोली प्रहार गर्ने राधे भण्डारी र समिरमान बस्नेतलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । पुनरावेदन अदालतले ज्यानमार्ने उद्देश्यले गोली प्रहार भएको भन्दै थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो । तर, भण्डारी र बस्नेतलाई सो अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले घरौंटीमा छाडेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले घरौंटीमा छाड्न दिएको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले पुनरावेदन अदालत गएको थियो । पुनरावेदन अदालतले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै थुनामा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न गत महिना आदेश दिएको थियो । ०७० असार २१ मा धादिङबाट राजधानी फर्किने क्रममा चरीमाथि बाफलका गुण्डा समिरमान बस्नेत र राधेको समूहले ज्यानमार्ने उद्देश्यसहित गोली प्रहार गरेको थियो ।
उक्त गोली काण्डपछि चरी न्यायका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पुगेका थिए । तर काठमाडौं जिल्ला अदालतले एक लाख धरौंटीमा उनीहरुलाई छाड्ने आदेश दिएको थियो । हातहतियार मुद्दामा भने ढेड लाख धरौंटीमा राधेले उन्मुक्ति पाएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अदालतको थुनछेक आदेश माग बमोजिम नभएपछि सरकारी वकिल धरौटी बदर र थुनामा राख्नुपर्ने माग दाबी गर्दै पनरावेदन अदालत ललितपुर पगेको थिए । उक्त निवेदन अनुसार थुनामा राख्न पर्याप्त प्रमाण रहेको भन्दै पुनरावेदनले जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको थुनछेक आदेशलाई बदर गर्दै थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । ढेड महिना अघि पुनराबेदन अदालतबाट थुनामा राख्ने आदेश भएपनि जिल्ला अदालतले आदेशको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । धादिङमा हुने ठेक्कापट्टा, अबैध बालुवा खानीको कमिशन नमिल्दा राधे र चरीबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको थियो । चरीको समुहले राधेका भाईको हात काटि दिएपछि सुरु भएको ग्याङवारले अन्तत: चरीको ज्यानै गएको छ ।
भाईको हात काटि दिएपछि बदलाको भाबना जगाएका राधे बाफलका गुण्डा समिरमान बस्नेत र राजधानीका कुख्यात गुण्डा कुमार श्रेष्ठ उर्फ घैंटेको समुहमा आबद्ध हुन पुगेका थिए । बस्नेत र घैंटेको सहयोगमा गत बर्ष चरीमाथि राधेको समूहले थानकोटको सतुंगलमा गोली बर्साएको थियो । गोली प्रहारपछि अस्पताल पुगेका चरीले कानूनले कारबाही नगेर आफै ठिक पार्ने धम्की दिएका थिए । सोही अनुसार ६ महिना अघि चरीको समूहले स्वयम्भुमा राधेमाथि ज्यानमार्ने उद्देश्यले खुकुरी प्रहार गरेको थिए । राधेलाई खुकुरी प्रहार पछि चरी प्रहरीको सुचिमा मोष्ठ वान्टेड थियो । गत साता मात्र प्रहरीको मुडभेटमा चरी मारिएका छन् भने उनका परिवारले गैरन्यायिक हत्या भन्दै एक सातादेखि लास बुझ्न मानिरहेका छैनन् भन्दै मंगलबार प्रकाशित जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
« Reply #8 on: August 13, 2014, 08:07:39 PM »
मारिनु अघिल्लो दिन ‘चरि’ खुश्बुको हैन अर्की गलफ्रेन्डको अगाँलोमा
प्रहरी मुठभेडमा मारिएका दिनेश अधिकारी ‘चरि’ को खुश्बु मात्र नभइ अर्की एक गलफ्रेन्ड भएको पत्ता लागेको छ। प्रहरी अनुन्धानका क्रममा चरिको पछिल्लो समयमा गोठाटारतिर बस्ने एमबीबीएस पढ्दै गरेकी एक युबतीसंग अफेयर चल्न थालेको थियो। मारिनु अघी दुई सातादेखि गोदावरी बस्दै आएका चरी त्यहाँ तिनै युबतीसंगै रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट पुष्टी भएको स्रोतो दावी छ। चरीको अन्तिम रात तिनै युबतीसँग गोदावरीको एक रिसोर्टमा बितेको थियो।
मायाको जालो बुनेर अर्पणको सम्पत्ति उडाएपछि डन चरिसँग नजिकिन पुगेकी खुश्बुको महत्वकांक्षामा चरीको असुली धन्दाबाट थुपारेको कालो धनले समेत नभ्याएपछि चरि पछिल्लव समयमा आफै पनि परेसान थिए। बफै पनि आर्थिक संकटबाट गुज्रिएका चरिसँग खुश्बुको अपेक्षा धेरै थियो। सो अपेक्षा पुरा गर्न सहज हुन थालेपछि कम अपेक्षा रहेकी एक युवतीसँग नजिकिन पुगेका थिए।
खुश्बुले चिनजानेका ब्यापारी तथा मिटर ब्याजमा पैसा लगानी गर्नेसँग सरसापटको नाममा पैसा लिने र फिर्ता नगर्ने गरेको आरोप छ। सो रकम लिन खोज्दा उनले चरिलाई फोन गर्न लगाएर पैसा नतिर्ने उपाय खोज्ने गरेको पनि अनुसन्धानमा देखिएको छ।
हुनत बिश्वकै महंगो बिश्वबिद्यालयमा पढेर आफू सम्पन्न परिवारको छोरी दाबी गर्ने खुश्बु ओलीको वेलायत पढाइको पनि रमाइलो किस्सा छ। नेपालमा प्लस वन फेल भएपछि खुश्बुलाई उनकै पुराना प्रेमी अर्पणले पुतलीसडकस्थित एसी कन्सल्टेसीको सहयोगमा बेलायतको भिसा लगाएका थिए। त्यतिबेला अर्पण ब्यापारको सिलसिलामा बेलायत जाने र आउने गर्ने उनको पारिवारिक स्रोत बताउँछ।
अध्ययनका क्रममा दुई बर्षसम्म अपर्णसँगै खुश्बु बेलायतमा ‘लिभिङ टुगेदर’ रहेकी थिइन्। अर्पणमार्फत चिनजान भएका बेलायती नागरिक रोबट डंकनले खुश्बुलाई अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा स्कलरसिप मिलाइदिएका थिए। बिभिन्न ब्यक्तिहरुसँग पैसा सापट लिने अनि अर्पणलाई तिर्न बाध्य बनाउने खुश्बुको अनावश्यक सानका लागि खर्च गर्ने क्रममा अर्पण टाट पल्टिएपछि चरीसँग लागेको उनी निकट स्रोत बताउँछ ।
खुश्बुका कारण अर्पणले आफ्नो बिजुली बजारको पुर्खौली घरसमेत बिक्रि गरेका थिए। अर्पणलाई चटक्कै छोडेर चरितिर लागेकी खुश्बुले पछिल्लो समय चरिलाई ठगी धन्दामा प्रयोग गर्ने थालेकी थिईन् जसका कारण चरीको बजारमा तीन करोड भन्दा बढी पैसा तिर्न बांकी ने रहेको छ।
« Reply #9 on: August 13, 2014, 11:22:10 PM »
राजधानीका गुण्डा नाइके दिनेश अधिकारी चरिको प्रहरी मुठभेडमा मृत्यु भएको भनिएपछि अहिले चरिकी प्रेमिका बताउने खुश्बु ओली, ओलीको पूर्ब प्रेमी अर्पण कोईराला र प्रहरी निरक्षक कुमोद ढुंगेल चर्चाको शिखरमा छन्। आफ्नो प्रेमी दिनेशको सुनियोजित हत्या भएको भन्दै प्रेमिका खुश्बुले यस हत्या प्रकरणमा अर्पण कोईराला र प्रहरी निरक्षक कुमोद ढुंगेलको हात रहेको आरोप लगाइरहेका बेला रोशन पाण्डेले कोईरालासँग कुराकानी गरेका छन्। प्रस्तुत छ सोहि कुराकानीको सारसंक्षेपः
० तपाई यतिखेर कहां के गर्दै हुनुहुन्छ ?
– म अहिले ब्यापारको सिलसिलामा भारतमा छु ।
० खुश्बुले चरीको मृत्यु प्रकरणमा तपाईंमाथि दोष लगाएकी छन् त ?
– मैले पनि सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाए दिनेशको मृत्यु भएको कुरा । साथीहरुले पनि फोन गरेर दिनेशको मृत्यु भएको बताएका थिए । मैले यो दिन आउंछ भनेर कहिल्यै पनि सोचेको थिइन् । दिनेशको मृत्युमा म दुःखी छु । उसले मलाई मार्छु भन्थ्यो, फोनमा मैलेपनि जे मुखमा आयो त्यो भन्थे, यो दुबैतिरबाट चलिरहेको थियो । राधे भण्डारीको मुद्दामा जेलसम्म हाल्नु पर्छ भनेको चांहि हो । म त्यस्तो खुवी भएको को मान्छे हुं र राज्य लगाएर दिनेशको इन्काउन्टर गराउन सक्ने ? यो खुश्बुजीको आक्रोश मात्र हो ।
० तपार्इं र कुमुद ढुंगेलको प्रेम प्रस्ताबलाई खुश्बुले अस्वीकार गरेका कारण दिनेशको हत्या भएको आरोप लगाएकी छन् नि ?
– यो हास्यास्पद कुरा हो, यसमा कुनै दम छैन । सारा काठमाडौंलाई थाहा छ खुश्बु मेरो गर्लफ्रेन्ड हो भनेर । गर्लफ्रेन्डलाई प्रस्ताब राख्नुपर्ने कुरा नै आउंदैन् । कुरा आयो कुमुद दाइको, उहा“लाई खुश्बु मेरो गर्लफ्रेन्ड हो भन्ने राम्रोसंग थाहा छ । अनि उहांले कसरी प्रस्ताब राख्नु हुन्छ । नचांहिदो आरोप मात्र हो । यी सबै वकवास मात्र हुन् ।
० तपार्इं खुश्बुको राम्रो साथी र तपार्इंसग पारिवारीक सम्बन्ध मात्र हो भनेर खुश्बुले भनिरहेकी छन्, अलि कन्फ्यूज भयो नि ?
– हो म खुश्बुको राम्रो साथी हो । उहांसंग मैले नेपाल र बेलायतमा गरी ८ वर्ष संगै विताए । उहाँ र मेरो सम्बन्ध के थियो भन्ने कुरा उहाँ र मलाई चिन्ने सबैलाई थाहा छ । मैले भनिरहन जरुरी छ जस्तो लाग्दैन । ६ बर्ष बेलायतमा एउटै घरमा सँगै बस्ने ब्यक्तिको सम्बन्ध के हुन सक्छ सबैले अनुमान गर्ने कुरा हो ।
० तपार्इं उहांसंग कसरी ८ बर्ष बस्नु भयो त ?
– म खुश्बुको घरमा बसेको होइन । उहाँ र म एउटै घरमा चांहि बसको हो । किनकी हामी एक अर्का बिना एक छिन पनि भिन्न बस्न सक्ने थिएनौं । यसको मतलब म सधै खुश्बुजीकै घरमा बसेको भनेको चांहि होइन । मेरो घरमा पनि खुश्बु र म गएर बस्थ्यौं । मेरो घरमा ड्याडी र ममी मात्र हुनुहुन्छ । बिहे नगरेको केटीलाई सधै उतै राख्दा घरमा अलि अप्ठेरो मान्न थालेका कारण म र खुश्बुजी संगै बसेका हौं । उहांको घरमा दाजु, भाउजु, माता, पिता र दाजुहरुको साथीहरु आइरहने हुंदा एक जना नयां ब्यक्ति बस्दा कसैलाई मतलब नहुने रहेछ, त्यसैले म खुश्बुको घरमा बसेको हो । नेपालमा हुंदा धेरै उहांकै घरमा बसियो ।
० तपार्इं खुश्बुसंग बेलायतमा ६ बर्ष संगै बस्नुको कारण के हो ?
– उहाँलाई बेलायत लगेकै मैले हो । भिषा प्रोसेसिङदेखि सम्पूर्ण काम मैले नै गरेको हुं । बेलायतमा मेरो अपान्र्टमेन्ट थियो, जहाँ हामी संगै बस्यौं । अक्सफोर्ड यूनिभर्सिटीमा उनी पढ्दा लाग्ने खर्चदेखि सम्पूर्ण खर्च नै मैले व्यहोरेको हुं ।
० खुश्बुले त घर जग्गा बेचेको डेढ करोड रुपैयाँले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा पढेको बताउनु भएको छ त ?
– ल ठिक छ, उहाँले घर बेचेको डेढ करोड रुपैयाँले बेलायतमा पढ्नु भएको रहेछ । उहांको डेढ करोडमध्ये दाजुको विवाहमा ६० देखि ७० लाख खर्च भएको सारा काठमाडौंलाई थाहा छ । ६ बर्षको अबधिमा उहां नेपाल ५० पटक आउने र जाने गर्नु भएको छ, त्यो पनि स्पेशल सिटमा । जसको नेपाली मुल्य एक पटक कै नौं लाख पर्न जान्छ । बेलायतमा काम नगरिकन एक दिनपनि टिक्न सकिदैन । खुश्बुजी छ बर्षसम्म कुनैपनि काम नगरी त्यहां बस्दा उहांको घर बेचेको डेढ करोड रुपैयांले पुग्छ होला त ? त्यो पनि हाई प्रोफाईलमा । अनि कलेजको ट्युसन फि, उहाँको माता पितालाई स्वीट्जरल्याण्डलगायत युरोपका ८ मुलक र मलेशिया, सिङ्गापुर, दुवई जस्ता देशहरुमा पनि त्यही घर बेचेको डेढ करोडले घुम्न पुग्यो होला ? तपाई आफै अनुमान लगाउन सक्नु हुन्छ । यी त देखिने खर्चमात्र भए । यस्ता धेरै खर्च छन्, जुन खुश्बुजीको घर जग्गा बेचेको डेढ करोडले पुग्यो होला ?
अर्पण कोइराला र खुश्वु ओली
० तपाईको भनाई अनुसार खुश्बुको सम्पूर्ण कलेज खर्च देखि हाई प्रोफाईल जीवन जीउन तपाईंले नै खर्च गर्नु भयो । कति खर्च गर्नु भयो त अहिलेसम्म ?
– म मायामा विश्वास राख्दछु । जिन्दगी यसरी जीउनु की अरुलाई पनि जीवन दिन सकियोेस भन्दा भन्दै म कहिल्यै पनि थाकिन । त्यो व्यक्ति म नै थिए, मेरो सामाजिक कामबाट धेरैले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा फाईदा पाइरहेका छन् । खाएको म भन्दिन, हाम्रो भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर मैले उहांलाई खुसी–खुसी खर्च गरको हुं ।
० तपाईंको पैसामा अक्सफोर्ड यूनिभर्सिटीबाट शिक्षा हांसिल गरेकी शिक्षित खुश्बुले चरी इन्काउन्टर काण्डमा तपाईंलाई नै मुछ्नुको कारण के हो त ?
– मैले अघिपनि भनिसके, यो दिन देख्छु भनेर मलै कहिल्यै सोचेको थिइन । म यो बिषयमा संलग्न छु भन्ने कुराले मलाई नै अचम्ममा पारेको छ । किन र के को लागि खुश्बुजी ले मलाई यो आरोप लगाउदै हुनुहुन्छ मैले बुझ्न सकेको छैन् ।
० आठ बर्षको सम्बन्धमा कसरी दरार उत्पन्न भयो त ?
– म मेरा परिवार, साथीहरु, एक मायालुसंग आनन्दको जिन्दगी बिताइरहेको थिए । व्यापारको शिलशिलामा भारत गएको थिए । हामीबीच दुबैजनाको सहमतिमा एक अर्कोको फेसबुक खोल्ने गथ्र्यौं । एक दिन खुश्बुको फेसबुक खोलेर हेर्दा उहांले निकट मित्रलाई लेखेको म्यासेजमा ‘मेरो जीवनको आठ बर्ष मैले डम्ब ब्यक्तिसंग बिताएर खेर फाले, म अहिले दिनेश अधिकारीस“ग मनोरञ्जनात्मक जीवन बिताइरहेको छु । उहां एकदम कुल हुनहुन्छ । हाम्रो माया हावाको रुपमा आकाशमा उडीरहेको छ ।’ लेख्नुभएको रहेछ । यो पढेपछि मैले खुश्बुजीलाई गाली गरे । जीवनको पहिले गाली थियो मेरो उहा“प्रति । त्यही बेलामा दिनेशले पनि फोन गर्‍यो मैले त्यसलाई पनि गाली गरे । त्यहा“बाट नै दिनेशले मलाई मार्छु भन्दै हिडेको हो । यही कारणले हामी बीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन भएको हो ।
० तपार्इंकी शिक्षित प्रेमिकाले एक डनसग कसरी सम्बन्ध गासिन त ?
– दिनेशले खुश्बुलाई भाउजु भनेर सम्बोधन गर्दथ्यो । हाम्रो समाजमा भाउजु भनेको आमाको दोस्रो रुप हो । मलाई पनि दाजु भनेर माया गथ्र्यो । संसारमा तपाईं जस्तो मान्छे पनि हुंदो रहेछ भनेर पटक–पटक भन्ने गर्दथ्यो । दाई रमाईलो गर्न जाउ भन्थ्यो । उसले मलाई केटी साथीहरुसंग पनि भेटाउने गर्दथ्यो । त्यतिखेर उ एकछिन बाहिर गएर आउ“छु भन्दै दाई त बिग्रनु भएछ, फलानो होटलमा केटीसँग छ भन्दै खुश्बुलाई नै पठाउने गर्ने रहेछ । त्यस्तो धेरै पटक गर्‍यो । जुन कुरा मैले पछि मात्र थाहा पाए । अनि मसंग कारोबार गरेका व्यक्तिहरुलाई ‘अर्पण चोर हो त्यसले पैसा दिंदैन त्यसको केटीलाई अफिसमा गएर किचकिच गर्‍यो भने मात्र पैसा आउछ’ भनेर भड्काउदै गुण्डाहरु पठाउने रहेछ । कतिसम्म भने त्यति गरेर पनि नभई आफूपनि कतैबाट पुगेको जस्तो नाटक गरी केटी मान्छेलाई दुःख दिने हो, अर्पणसंगै हिसाब किताब गर भन्दै गाली गरेको नाटक गरेर खुश्बुको मन पगाल्ने रहेछ । अहिले म यो कुरा थाहा पाउंदै छु ।
० चरीका कारण खुश्बुलाई गुमाउनु भयो, खुश्बुको कारण के–के गुमाउनु भयो त ?
– मैले खुश्बुलाई गुमाएको होइन् । खुश्बुसँगको ८ बर्षको यात्रामा धेरै कुरा सिकेको छु । एक दिन जिन्दगी नै गुमाउनु पर्छ । अरु त फिर्ता हुनपनि सक्छ तर जिन्दगी कहिल्यै फिर्ता हुंदैन । गुमाउन त मैले ८ बर्षको अबधीमा मेरो मनपर्ने काम पनि गुमाए, मेरो एनजिओ र मेरो टीम नै दुनिया“ थियो मेरा लागि । मैले जसका लागि काम गरे उनीहरुको लागि खुशी र हांसो मात्र दिई । मैले अर्पणको अर्थ अरुलाई ‘दिनु हो’ भन्ने कुरा सानै देखि बुझेको थिए“ । त्यही भएर होला सायद म दिंदा दिंदा कहिल्यै थाकिन । दिएर पाउने खुसीले मलाई यति खुसी बनाउँछ कि त्यो खुसी संसारको सबै सम्पत्तिस“ग पनि दाज्न सक्दिन ।
० अर्को कुरा, तपार्ईंलाई त खुश्बुले लागूऔषधको कुलतबाट बचाएर नया जिन्दगी दिएको कुरा सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् ?
– यो सब वकवास हो । खुश्बुजीलाई भेट्दा म कुलतबाट निस्किसकेको थिए । म सन् २००५ देखि २००६ सम्म एक बर्ष भूपू एसएसपी बसन्तराज कुंवरको नार्कोनन नेपालमा बसेर कुलतबाट उन्मुत्ति भई ‘एण्टी ड्रग्स’ सम्बन्धी ट्रेनिङ दिने गरेको थिए । त्यहि शिलशिलामा राष्ट्रिय सभागृहमा ‘एण्टी ड्रग्स’ सम्बन्धी ट्रेनिङ दिन जाँदा खुश्बुजीसँग भेटघाट र चिनजान भएको हो । उहां त्यतिखेर मिस टिनपनि हुनु भएको थिएन । त्यहां उप्रान्त मेरो शरिरमा लागूऔषधको कुनैपनि नशा परेका छैनन् । यो कुरा बसन्त सरलाई पनि थाहा छ । खुश्बुजीले बजारमा मलाई सुधारेको हल्ला पिटाई रहनु भएको छ । यो सब झुटको खेती मात्र हो ।
० खुश्बुसंगको सम्बन्ध कसरी गहिरिन पुग्यो त ?
– सभागृहमा भेटसंगै उहां र मबीच फोन आदन–प्रदान भयो । खुश्बुजीले मलाई पनि समाजसेवा गर्न मन छ भनेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । यस्तै गफ हुंदै जांदा सम्बन्ध गहिरो हुंदै गयो ।
० सेल्टर नामको सामाजिक संस्था कसको हो त ?
– यो मेरो ड्याडीले सुरु गरेको संस्था हो । ड्याडीको दुर्घटनापछि यसको अध्यक्ष म थिए । पछि खुश्बुजीले काम गर्न मन गरेपछि उहांलाई छोडिदिएको हुं ।
० अन्तमा केहि भन्नु हुन्छ ?
– मेरो सोच कहिल्यै उहाँको बदनामी गर्नु थिएन् । तर सहन धेरै गाह्रो हुंदो रहेछ । खुश्बुजीलाई आफू सहि भन्न त्यति सजिलो छैन । उहांकै माता पितालाई पनि सायद खुश्बुजीले म प्रति गरेको व्यवहार ठिक लागेको छैन होला । किनकी उहाँहरुको आंखामा सधै मप्रति माया थियो । तर यस्तो बेलामा खुश्बु सहि साबित हुन अर्पण गलत हुनु उचित होला ? त्यसैले आठ वर्ष अर्पण कोइराला जुन घरमा भगवान भएर बस्यो आज आठ मिनेटमा नै उसलाई राक्षस भन्दा तल पुर्‍याइएको छ । यो सब कुरा चरीसंगको मिलेमतोमा भइरहेको थियो ।
(स्रोतः अपराधखबर डटकम।)